TogaHerer: Xuka 25-Guurada Maalinta Shuhadada ee SNM 17/10/1984kii – 17/10/2009 Qormadii: 2aad
Xuka 25-Guurada Maalinta Shuhadada ee SNM 17/10/1984kii – 17/10/2009 Qormadii: 2aad
Yuusuf Meydal Cumar isaga oo meel fog oo hortiisa ah eegaya anna is-leeyahay muuqaalladii maalintaas ayay hadba sidii hillaaca u soo maraya, ayuu iigu jawaabay:
“Hub waxaanu ka haysannay hubka fudud ee loo yaqaan ‘small arms’. Waxa noogu weynaa qoryaha loo kala yaqaan sebenka iyo BKM-ka. Waxa kale wuxu ahaa qoriga AK-ga ahaa ee aanu Dugsigii Tababarka kala soo baxnay kaas oo loo yaqaannay ‘Nuur-Madoobe.”
Waxaynu ka hadlaynay 17kii Oktoobar 1984kii oo ku suntan Maalinta Shuhadadii SNM. Weliba manta waa 25-guuro oo maalmaha iyo sannadahaba kuma jirto. Ilaahay baa inagu simay. Maalintaa 72 maalmood ayaa laga joogay Shirweynihii 4aad ee SNM oo ka furmay magaalada Jigjiga Xaruntii Gaaskii 10aad ee Ciidammada Itoobiya. Shirweynahaa 4aad wuxu furmay 6dii Ogos 1984kii. Shirweynahaa 4aad Shahiid Cabdilqaadir Koosaar Cabdi ayaa xilkii Guddoomiyennmo ku wareejiyay Axmed Maxamuud Siilaanyo. Shahiid Maxamed Xaashi Diiriye, Lixle, wuxu ka mid ahaa Guddidii Fulinta ee markaa xilka wareejisay isaga oo gacanta ku hayay Ciidammada Xoreynta ee SNM. Haddii aanay xusuustaydu I dagayn Shirweynahaba kama soo qayb-gelin oo wuxu ku sugnaa oo la joogay Ciidammada Awaare ku tabobaranayay.
Dugsigaa Tababarka ee Awaare waxa la furay bishii Abriil 1984kii oo halkaa ku qabsoomay Kal-fadhi Gole Dhexe oo go’aammo badan oo dhaxal-gal ahaa lagu gaadhay, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen: